इरानी तेल आयातमा दिइएको छुट अन्त्य गर्ने ह्वाइट हाउसको तयारी
scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७
वासिङ्टन, ९ वैशाख । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी खनिज तेलको आयात रोक्न अन्यथा प्रतिबन्धको सामना गर्न आयातकर्ताहरुलाई चेतावनी दिने तयारी गरेको छ । अमेरिकाले यससम्बन्धी घोषणा स्थानीय समयअनुसार सोमबार गर्ने अपेक्षा गरिएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ ।
अमेरिकी तयारीबारे समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिसँगै सन् २०१९ मा तेलको मूल्य सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले समेत गत वर्ष इरानी तेलको आयातमा केही आयातकर्तालाई दिइएको छुट तत्काल अन्त्य गर्न ह्वाइट हाउसले तयारी गरेको समाचार छापेको थियो ।
बेन्चमार्क कच्चा तेलको मूल्यमा सोमबार ३.२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएर प्रति ब्यारेल ७४.३१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो दर गत वर्ष नोभेम्बर १ को तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो । इरानी तेलमाथि हुने प्रतिबन्धले आयातमा प्रभाव पर्नेछ ।
अमेरिकी कम्पनी वेस्ट टेक्सास इन्टरमेडियट (डब्लुटीआई) को मूल्यमा पनि ३ प्रतिशत वृद्धि भएर प्रति ब्यारेल ६५.८७ डलर कायम भएको छ । यो मूल्य गत अक्टोबर ३० यताकै सबैभन्दा उच्च हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि ‘अधिकतम आर्थिक दबाब’ सिर्जना गर्न इरानी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने र तेलबाट हुने राजश्वलाई शून्यमा झार्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।
गत नोभेम्बरमा अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै इरान र अमेरिका सहित विश्वका ६ वटा महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच भएको सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रुपमा अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरी इरानमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।
तर वासिङ्टनले इरानी तेल आयातकर्ता आठवटा मुलुकलाई केही समयका लागि तेल आयातमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । खासगरी चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, टर्की, इटाली र ग्रीसलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो । यी मुलुकलाई छ महिनाका निम्ति इरानी तेल आयातमा छुट दिइएको थियो ।
सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आगामी मे २ तारिखदेखि यस्तो सुविधा प्राप्त नहुने घोषणा गर्न लाग्नुभएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ ।
यस वर्ष तेल निर्यातकर्ता मुलुकहरुको संगठन (ओपेक) ले आपूर्ति कटौती गरेका कारण कच्चा तेलको मूल्य बृद्धि भएको छ । परिणामस्वरुप, ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य जनवरी यतामात्र तीन पटकभन्दा बढी पटक बृद्धि भएको छ ।
विश्लेषकहरुले ट्रम्प प्रशासनले तेलको अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि रोक्न ओपेक र यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता साउदी अरेबियामाथि तल आपूर्ति कटौती नगर्न दबाब दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्धबाट सिर्जना हुनसक्ने असरका बारेमा साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सल्मानसँग पनि गत साता फोनवार्ता गरेका थिए । रासस/एपी
२३ लाख मोजाम्बियाली एचआइभी संक्रमित
उडिरहेको विमान भित्र जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिए
बोलिभियाकी राष्ट्रपति पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित
कोरोना भाइरसले ५ लाख ५७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो
चीन र जापानका विदेशमन्त्री बीच फोनवार्ता
राजनीति, विचार, विशेष, विश्व
चीन–भारत सीमा विवाद चर्किंदै गए दक्षिण एशियाका साना छिमेकीहरु तटस्थ रहन सक्लान् ?
भारतमा कोभिड-१९ : एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित
अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता नहुने
बेलायतमा ६० देशको नागरिकलाई प्रवेश अनुमति, अमेरिकन र भारतीयलाई प्रवेश निषेध
भारतका कुख्यात गुण्डा नाइके विकास दुवे प्रहरी इनकाउन्टरमा मारिए
मुख्य समाचार, विश्व
विश्वभर कोरोना भाइरस, ७१ लाख ८६ हजारभन्दा बढी संक्रमित निको भए
ब्राजिलमा कोरोना भाइरस, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
भारतमा कोरोना भाइरस, एकैदिन ४७१ जना संक्रमितको मृत्यु
कोरोना कहरः अमेरिकामा मृतक र संक्रमित दुवैको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो
कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड २० लाख नाघ्यो
अर्थ / व्यापार, विश्व
अमेरिकामा थप १३ लाख व्यक्तिद्वारा बेरोजगारी भत्ता दावी
श्रीलङ्काद्वारा नीतिगत दरहरूमा कटौती, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने विश्वास
भारत र युरोपेली संघको सम्मेलन जुलाई १५ मा, मोदीले सहभागिता जनाउने
डब्ल्यूएचको स्पष्टोक्तिः विभाजित विश्वले महामारीमाथि विजय गर्न सक्दैन
विज्ञान / प्रविधि, विश्व
अष्ट्रेलियामा पनि उठ्यो टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने माग
फिचर पोस्ट, विश्व
बोल्सोरानोले बर्बाद पारे ब्राजिल !
अख्तियारकाे अनुसन्धान अधिकृत भन्दै करोडौँ ठग्ने ज्योतिष बताउने अर्जुन क्षेत्रीसहित ९ जना पक्राउ
काठमाण्डौं, २६ असार । जग्गा व्यवसायीसँग गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा आफूलाई ज्योतिष बताउने अर्जुनकुमार थापा क्षेत्रीसहित...
नेकपा विवादमा चीनको चाहना के हो ?
सत्तारुढ नेकपाभित्र हुने अन्तर्संघर्षमा चीनले नजिकबाट चासो राख्दै आएको छ । तर, यो चासोको कारण के हो ? नेकपाभित्रको गुट संघर्षमा...
एजेन्सी, २६ असार । कोरोना भाइरस महामारीले युरोपलाई ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएसँगै जीवन ठप्प छन् । महामारीको शुरु चरणमा...
सोती घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग
रुकुम पश्चिम, २६ असार । रुकुम पश्चिमको चौरजहारि नगरपालिका ८ सोती घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई अमेरीकाबाट आर्थिक सहयोग...
‘हामी वीर छौं तर बुद्धु छौँ !’
काठमाडाैं, २६ असार । जनता समाजवादी पार्टीका नेता एव‌ं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वेराेजगार नेपाली युवालाइ विदेशी...
भोटेकोशी वितण्डा : यस्तो छ मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण
फाइल फोटो सिन्धुपाल्चोक, २६ असार । बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा भोटेकोशीले मच्चाएको वितण्डाका कारण ठूलो...
काठमाडौँ, २६ असार । अमेरिकामा एकैदिन ६१ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता लगातार अमेरिकामा...
देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीहरुलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । शुक्रबार राति साढे ८ बजे आसपास...
Copyright © 2020 Free and Fair Media Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved.